WizAct 24 နဲ့ အိမ်မှာရှိတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကို ဘယ်လို ပိုးသတ်သန့်ရှင်းကြမလဲ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေအရ အထူးသဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ထဲက မကြာခဏ ထိတွေ့နေရတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကို ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နေ့တိုင်း တစ်အိမ်လုံးက ရှိသမျှနေရာတွေကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ပိုးမွှားတွေ ရှိနေတတ်တဲ့ နေရာတွေကို အဓိက ပိုးသတ်ပေးရင် ရပါတယ်။
အိမ်မှာ အသန့်ဆုံးလို့ ထင်ရတဲ့နေရာတွေ၊ တစ်ခါတလေ အိမ်သားတွေ လုံးဝထင်မထားတဲ့ နေရာတွေမှာတောင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပိုးမွှားတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ပိုးသတ်သန့်ရှင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတိုင်း တစ်ချို့အိမ်မှုကိစ္စတွေလို အချိန်ပေးပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပိုးမွှားတွေ အများဆုံး ရှင်သန်ပေါက်ဖွားနေနိုင်တဲ့ အိမ်ထဲကနေရာတွေကို ဘယ်လို အလွယ်တကူ ပစ်မှတ်ထားပြီး ပိုးသတ်နိုင်လဲဆိုတာ အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီခွဲပြီး ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ အခုဖော်ပြသွားမယ့် ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးအတွက် အကြံပေးချက်တွေက ပိုးမွှားတွေ ဆက်ပြီး မပျံ့နှံ့အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အိမ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ကပ်ငြိနိုင်ခြေကနေ လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အတွက် မိသားစုကို ကာကွယ်ပေးရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်မှာပါ။
ဒါဆို အိမ်မှာ ပိုးသတ်သန့်ရှင်းဖို့ ဘယ်လို ပိုးသတ်ဆေးကို သုံးသင့်ပါလဲ?
WizAct 24 ဆိုတာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မျက်နှာပြင်ပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ပြီး တစ်ချက်ဖြန်းလိုက်ရုံနဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ၉၉.၉% သော ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဖြန်းပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာလည်း WizAct 24 ရဲ့ ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းက အဲ့ဒီ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်က ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်လို့ လူတွေဘယ်လောက်ပဲ ထပ်ပြီး ထိတွေ့ပါစေ (၂၄) နာရီလုံး ပိုးသတ်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်ပြီး ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မဖြစ်မနေ ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးဖို့ အလိုအပ်ဆုံး အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီရဲ့ စာရင်း!
အိမ်မှာ မကြာခဏ ထိတွေ့မှုအရှိဆုံး မျက်နှာပြင်တွေနဲ့ ပစ္စည်းတွေအကြောင်း အိမ်ဝင်ပေါက်ကနေစပြီး ပြောရအောင်။ ဒီနေရာမှာ အိမ်ဝင်ပေါက်အနားက လူခေါ်ခေါင်းလောင်း၊ မီးခလုတ်၊ တံခါးလက်ကိုင်၊ ဖိနပ်စင်၊ သော့ချိတ်တဲ့စင်၊ ဝင်ပေါက်နားက စားပွဲ၊ ကောင်တာ၊ ထီးထားတဲ့ပုံးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ဧည့်ခန်းထဲက လဲလျောင်းအနားယူတဲ့နေရာ အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ မီးခလုတ်၊ TV ရီမုတ်နဲ့ အခြား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေမှာလည်း ပိုးမွှားတွေ ခိုအောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေအပြင် TV စင်၊ ကော်ဖီစားပွဲ၊ မီးအုပ်ဆောင်း၊ ဆိုဖာနဲ့ အလှဆင်ခေါင်းအုံး၊ ပြတင်းပေါက်၊ ခန်းဆီးလိုက်ကာ၊ ယင်းလိပ်နဲ့ မတ်တပ်ပန်ကာတွေကိုလည်း WizAct 24 သုံးပြီး ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။
မီးဖိုချောင်ဆိုတာ အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အဓိကနေရာဖြစ်ပေမယ့် မကြာခဏ ထိတွေ့ရတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေ အများကြီးရှိပြီး အိမ်ကိုဝယ်လာတဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ၊ အစားသောက်တွေကို မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ထားတတ်ကြတာကြောင့် တခြားအခန်းတွေထက် ပိုးမွှားတွေ ပိုရှိနေနိုင်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်စားပွဲ မျက်နှာပြင်၊ အစားအသောက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာနဲ့ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ကြောင်အိမ် အပါအဝင် ရေပိုက်ခေါင်းနဲ့ ဘေစင်နေရာက လက်ကိုင်တွေကိုလည်း ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။
ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ နေရာတွေက ပိုးမွှားတွေ ပေါက်ဖွားလေ့ရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းတံခါးလက်ကိုင်၊ အိမ်သာရေဆွဲချတဲ့ခလုတ်၊ ရေပိုက်ခေါင်း၊ ရေချိုးခန်းသုံးဗီရိုတွေ၊ အမှိုက်ပုံးတွေနဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ချိတ်တဲ့တန်းတွေကို ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
လူအများစုဟာ အိပ်ခန်းထဲမှာပဲ အချိန်တော်တော်များများ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိတဲ့အတွက် အိပ်ခန်းတံခါးလက်ကိုင်၊ မှန်တင်ခုံ၊ အဝတ်ဗီဒို၊ အိပ်ရာဘေးက စားပွဲခုံ၊ မီးအိမ်၊ နှိုးစက်နာရီ၊ မွေ့ရာနဲ့ ခေါင်းအုံး စတဲ့ ပုံမှန် ထိတွေ့ဖြစ်တဲ့ မျက်နှာပြင်တွေကိုလည်း ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ကလေးတွေ ဆော့ကစားတတ်တဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ပုံမှန် ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့ဖြစ်တဲ့ မျက်နှာပြင်နဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကလေးတွေဆော့တဲ့ ဘောလ်ပင်၊ စာရေးစားပွဲနဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့အခါ ကစားစရာတွေ ထားတဲ့နေရာ ဒါမှမဟုတ် ပုံးတွေကိုလည်း ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးရပါမယ်။
အိမ်က အလုပ်ခန်း (သို့မဟုတ်) စာဖတ်ခန်း
အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့၊ စာဖတ်ပြီး အနားယူတဲ့ နေရာက ထိုင်ခုံ၊ စားပွဲ၊ ကွန်ပျူတာ၊ လက်တော့ပ်၊ ကီးဘုတ်၊ မောက်စ်၊ ပုံနှိပ်စက်၊ စာရွက်စာတမ်းထားတဲ့နေရာ၊ စာအုပ်စင်နဲ့ စာကြည့်မီးအိမ်တွေကို ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦး။
ကဲ…ပျော်ဖို့မကောင်းဘူးလား? အိမ်မှာရှိတဲ့ အခန်းတိုင်းကို ပိုးသတ်သန့်စင်ဖို့က နည်းနည်းလေး အလုပ်များပေမယ့်လည်း ဒီလို ပိုးသတ်မထားဘူးဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပိုးမွှားတွေက ထင်မထားတဲ့နေရာမှာ ရှိနေနိုင်ပြီး တစ်ချို့မျက်နှာပြင်တွေမှာဆိုရင် နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ရှင်သန်ပေါက်ဖွား နေနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ (၁၅) မိနစ်လောက် ပုံမှန် အချိန်ပေးပြီး အိမ်ကို ပိုးသတ်သန့်ရှင်းလိုက်တာက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ မိသားစုကို ဗိုင်းရပ်စ်တွေ မကူးစက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တစ်ခု လုပ်နိုင်လိုက်တာဖြစ်လို့ ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အိမ်မှာ နေထိုင်နိုင်မှာပါ။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ WizAct 24 ကို 450ml အရွယ်အစားနဲ့ နီးစပ်ရာ စတိုးဆိုင်တွေကနေ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ WizAct 24 450ml အရွယ် ဘူးတစ်ဘူးကို အကြိမ် (၇၀၀) လောက်အထိ ဖြန်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဘူးချင်း ဈေးကတော့ မြန်မာငွေ (၄၂၀၀) ကျပ် ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ WizAct 24 ကို အိပ်ဆောင်ပိုးသတ်ဖြန်းဆေးဘူး (18ml) ကို မြန်မာငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး WizAct 24 ပိုးသတ်ပုဝါ (၁၀) ခုပါ တစ်ထုပ်ကို မြန်မာငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင် ပါတယ်။